(b) The Renter has examined the Goods prior to the execution of the Agreement and is satisfied that the Goods are in good and road-worthy (in the case ofamotor vehicle) condition and good state of repair and fit for the purpose required by him. The word “second-hand” appearing herein means that the Goods are not new and have been in the ownership or possession of one or more persons before acquired by the Owner.
(d) To make all repairs and replacements to the Goods required to keep the Goods in “like new” condition. The Renter will pay for all repairs and replacements.
(a) the “Total Amount Payable” specified in item5of the Agreement and any penalty fees assessed under Clause5(Penalty Fee), minus
(d) where there are two or more persons included in the expression the “Renter” such persons shall be deemed to be jointly and severally liable;
(e) “Business Day” means any day other thanaSaturday, Sunday or public holiday in Myanmar;
(a) all references to “MMK” shall be to the Myanmar currency;
(b) “Guarantor” means any person or party givingaguarantee or any other form of support or collateral in favour of the Owner under the Agreement; and
(ခ) ငှားရမ်းသူသည် ကုန်ပစ္စည်းများကို ယခု စာချုပ်မချုပ်ဆိုမီကပင် စစ်ဆေးပြီးဖြစ်ကြောင်း ၊ ကုန်ပစ္စည်း များသည် (မော်တော်ယာဉ်ဖြစ်လျှင်) ကောင်းမွန်ပြီး လမ်းတွင်မောင်းနှင်နိုင်သည့် အခြေအနေတွင်ရှိ ကြောင်း ၊ ကောင်းစွာပြုပြင်ထားကြောင်း နှင့် ၎င်းသတ်မှတ်ထားသည့် ရည်ရွယ်ချက်အတွက် သင့်လျော် ကြောင်း လက်ခံပြီးဖြစ်သည်။ “တစ်ပတ်ရစ်” ဟူ၍ ဤတွင်ရည်ညွှန်းသည်မှာ ကုန်ပစ္စည်းများသည် အသစ်မဟုတ်ကြောင်း ယင်းတို့အားပိုင်ရှင်မှ မဝယ်ယူခင်က ပိုင်ဆိုင်သူ တစ်ဦး သို့မဟုတ် တစ်ဦးထက် ပို၍ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
(ဃ) ကုန်ပစ္စည်းအား “အသစ်ကဲ့သို့” အခြေအနေတွင်ရှိနေစေရန်အတွက် လိုအပ်သည့် ပြုပြင်မှုများ နှင့် အစားထိုးလဲလှယ်မှုများကို ပြုလုပ်ရမည်။ ပြုပြင်မှုများ နှင့် အစားထိုးလဲလှယ်မှုများအတွက် ငှားရမ်း သူမှ ကျခံရမည်။
(ဂ) “အလုပ်ဖွင့်ရက်” ဆိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စနေ၊ တနင်္ဂနွေ သို့မဟုတ် အများပြည်သူ ရုံးပိတ်ရက်မှတပါး အခြားရက်များကိုဆိုလိုပါသည်။
(ဃ) “MMK” ဆိုသည်မှာ မြန်မာကျပ်ငွေဖြစ်ပါသည်။
(င) “အာမခံသူ” ဆိုသည်မှာ သဘောတူစာချုပ်အရ ပိုင်ရှင်အတွက် အာမခံပေးသူ သို့မဟုတ် အခြားမည်သည့် ပုံစံဖြင့်မဆို ပိုင်ရှင်ကို ထောက်ခံသူ သို့မဟုတ် ပိုင်ရှင်အတွက် အာမခံပစ္စည်းပေးသော မည်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် စာချုပ်ဝင်ကိုမဆို ဆိုလို သည်။